adeegga.01@anbotek.com 86-755-26053656 anbotek
Kala soocay shaybaarka
Wireless & RF Lab
Shaybaarka Amniga Korantada
Shaybaarka Tamarta cusub
Shaybaarka Qalabka Cunnada La Xiriir
Shaybaar lagu kalsoonaan karo
Shaybaarka waxtarka tamarta
Shahaadada Caalamiga ah
Qalabka Labiska Gawaarida
Shaybaarka Module Photovoltaic
Shaybaarka Deegaanka Deegaanka
Lagu kala soocay Line Line
Alaabta IT / AV
Batariga Tamarta Cusub
Qiimaha lagu daray adeegga
Maareynta alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha
Adeegga Qorshaynta Sheybaarka & Iibsiga
Soo saarida imtixaanada EMC ee dhacay
Baadhitaan Warbixin ah
Foomka Codsiga ee Tijaabada
Ku saabsan Anbotek
U qalmida iyo Geeska
Sharciga Jarmalka ee Maareynta Cuntada iyo Badeecadaha, oo sidoo kale loo yaqaan Sharciga Maareynta Cuntada, Waxyaabaha Tubaakada, Qurxinta iyo Badeecadaha kale, ayaa ah dukumintiga ugu muhiimsan ee aasaasiga ah ee sharciga maareynta nadaafadda cuntada ee Jarmalka.
Waa shuruudaha iyo udub dhexaadka sharciyada iyo qawaaniinta nadaafadda gaarka ah ee cuntada kale. Shuruucda ku saabsan cuntada Jarmalka si loo sameeyo guud iyo nooca aasaasiga ah ee qodobbada, dhammaantood ku jira cuntada suuqa Jarmalka iyo dhammaantoodba cuntada
Badeecadaha ay khusayso waa inay u hoggaansamaan qodobbada aasaasiga ah. Qeybaha 30, 31 iyo 33 ee Sharciga ayaa qeexaya shuruudaha badbaadada qalabka la xiriira cuntada:
• LFGB Qaybta 30 waxay mamnuucaysaa badeecad kasta oo ay ku jiraan walxo sun ah oo khatar u ah caafimaadka dadka;
• LFGB Qaybta 31 waxay mamnuucaysaa walxaha khatarta ku ah caafimaadka aadanaha ama saameeya muuqaalka (tusaale, u guurista midabka), ur (tusaale, socdaalka ammonia) iyo dhadhanka (tusaale ahaan, socdaalka aldehyde)
Ka wareeji sheyga una gudbi cuntada;
• LFGB Qaybta 33, Waxyaabaha lala xiriirayo cuntada lagama yaabo in la suuq geeyo haddii macluumaadku marin habaabin yahay ama matalaaddu aysan caddeyn.
Intaas waxaa sii dheer, guddiga qiimeynta halista Jarmalka ee BFR wuxuu siiyaa tusayaal nabadgelyo oo lagu taliyay iyada oo loo marayo daraasadda walxaha lala xiriirayo cunnada. Sidoo kale tixgelinta shuruudaha LFGB Qaybta 31,
Marka lagu daro qalabka dhoobada, dhammaan walxaha taabashada cuntada ee loo dhoofiyo Jarmalka ayaa sidoo kale looga baahan yahay inay ku aflaxaan tijaabada dareenka ee alaabta oo dhan. Iyada oo ay weheliyaan shuruudaha qaab-dhismeedka LFGB, xeerarkani waxay ka kooban yihiin nidaamka sharciyeynta maaddada Xiriirka cuntada Jarmalka.
Waxaan bixinaa adeeg 24-saac ah, fadlan toos noola soo xiriir!
1 / F, Dhismaha D, Sogood Science iyo Technology Park, bulshada Sanwei, Hangcheng Street, Degmada Bao'an, Shenzhen, Guangdong, Shiinaha
Bogga Shiinaha: https: //www.anbotek.com.cn/
<a href = 'https: //en.live800.com'> sheekaysiga tooska ah a>